Nahita antony iverenana amin’ny hetsi-panoherana ‘Maimbo Ianao’ ny tao Libanona telo taona taty aoriana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Septambra 2018 4:40 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Français, Deutsch, Español, Ελληνικά, русский, English
Mpanao fihetsiketsehana manao diabe manohitra ny fandoroana fako tany Beirota. 29 Aogositra, 2018. Sarin'i Hassan Chamoun, nahazoana alalana.
Nipoaka tao Beirota ny hetsi-panoherana vaovao nataon'ny hetsika “Maimbo Ianao” tao Libanona taorian'ny fanambaran'ny manampahefana fa hanohy hiasa amin'ny orinasa fandoroana fako izy ireo mba hamahana ny krizy mitohy mikasika ny fakon'ny tanandehibe.
Nanao diabe nankany amin'ny parlemanta tao Libanona sy tany amin'ny biraon'ny Minisitera misahana ny tontolo iainana tamin'ny 29 Aogositra ireo mpanao hetsi-panoherana, izay andro nahatsiarovana ny fahatelo taonan'ny hetsika notarihin'ny tanora tao Beirota. Tamin'ny taona 2015, nanetsika olona an'arivony ny “Maimbo Ianao” tamin'ny fanoherana ny tsy fahaiza-mitantan'ny governemanta ny fako ary lasa fihetsiketsehana an-dalambe lehibe indrindra tsy manohana antoko tao Libanona izany hatramin'ny nifaranan'ny ady an-trano tamin'ny taona 1991.
Tamin'ny volana Oktobra 2016 no nanambaran'ny manampahefana tao Beirota voalohany ny drafitrasa fandoroana fako rehefa avy nifanakalo hevitra tamin'ny manampahefana tany Copenhagen izy ireo, izay heverina fa ilay renivohitra Eoropeana madio indrindra. Voalaza fa nanolo-kevitra amin'ny fananganana orinasa mpanodina fako ho angovo mba hiatrehana ny krizy ny Danoà .
Na izany aza, tsy faly tamin'ity vahaolana ity ireo mpahay siansa Libaney maro sy ny fikambanan'ny fiarahamonim-pirenena. Nilaza izy ireo fa mampidi-doza amin'ny tontolo iainana ny lavenon'ny akora ary sarotra sy lafo vidy ny fitantanana izany.
Ny mponin'i Karantina, faritra indostrialy iray ao Beirota izay efa manana toerana an-kalamanjana roa hitobian'ny fako, dia anisan'ireo nampianka-peo indrindra hanoherana ny orinasa mpanodina fako ho angovo. Tamin'ny taona 1997, niaraka tamin'ny fanampian'ny Greenpeace, nirongatra nanao fanentanana tsy an-kijanona izy ireo, ka niafara tamin'ny fahombiazan'ny fanentanana manohitra ny drafitry ny manampahefana hanangana ny fandoroana fako ao amin'ilay faritra izany.
Roapolo taona taty aoriana, tamin'ny 30 Aogositra 2017, dia nidina an-dalambe indray izy ireo taorian'ny siosion-dresaka fa nofidiana ho an'ny orinasa mpanodina fako hamokarana herinaratra vaovao ny faritra. Nilaza anefa ny ben'ny tanànan'i Beirut Jamal Itani fa tsy mbola nisy toerana voafaritra ho amin'izany.
Iray tamin'ireo mpitsikera hafa nampiaka-peo tao Beirota momba ny vahaolan'ny fandoroana fako ny Waste Management Coalition (Fiaraha-mitantana ny Fako), izay miaro ny vahaolana maharitra amin'ny olan'ny fako. Nanamafy izy ireo fa raha toa ka nahomby ny fandoroana fako tany Eoropa dia tsy manana ny fotodrafitrasa hiantohana ny fampiasana izany amin'ny fomba azo antoka kosa i Libanona.
Nanomboka fanangonan-tsonia ny vondrona tamin'ny volana Febroary 2018 ary nangataka ny hanamafisan'ny manampahefana ny politika hampihenana ny famokarana fako, hampihatra ny fandaharanasan'ny fanodidinana akora efa niasa ary hametraka fomba fiasa mifanaraka amin'ny lalàna ara-tontolo iainana nasionaly sy iraisam-pirenena. Nahangona mpanohana miisa 727 avy amin'ny tanjona miisa 50.000 napetraka ny fanangonan-tsonia.
Ankoatra izany, nisy vondrona akademika avy ao amin'ny Oniversite Amerikana ao Beirota nanao fihaonambe tamin'ny volana Martsa 2017 ary nanolotra porofo ara-tsiantifika manohitra ny fananganana ny fandoroana fako .
Tany am-piandohan'ny taona 2018, namoaka fanadihadiana iray mikasika ny loza mety hitranga amin'ny fandoroana fako i Ziad Abichaker, mpikatroka mafàna fo mpandala ny tontolo iainana sady mpandraharahan'ny fanodinana fako ary naneho fa tokony hiahiahy amin'ny fiantraikan'izany ny mponina ao Beirota amin'ny tontolo iainana sy ny fahasalaman'ny vahoaka.